मङ्कीपक्स्काे जाेखिम बढ्दाे क्रममा; ब्राजिलमा पनि पहिलाे पटक मङ्कीपक्स् पुष्टि ! - Mitho Khabar
June 18, 2022 mithokhabarLeaveaComment on मङ्कीपक्स्काे जाेखिम बढ्दाे क्रममा; ब्राजिलमा पनि पहिलाे पटक मङ्कीपक्स् पुष्टि !
ब्राजिलको साओ पाउला सहरमा बिहीबार मङ्कीपक्स् पहिलो घटना पुष्टि भएको स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारीहरूले बताएका छन् । भर्खरै स्पेन र पोर्चुगलको यात्रा गरेका ४१ वर्षीय पुरुषमा सो भाइरस भेटिएको सहरको स्वास्थ्य सचिवालयले एक विज्ञप्तिमा जानकारी दिएको छ ।
बिरामीलाई हाल एमिलियो रिबास सार्वजनिक अस्पतालमा अलग्गै राखिएको बताइएको छ । यद्यपी यसअघि पनि साओ पाउलोमा २६ वर्षीया एक महिलालाई मङ्कीपक्स् हो कि भन्ने शङ्कामा अस्पतालमा भर्ना गरेर अनुसन्धान भइरहेको सचिवालयले जानकारी दिएको छ ।
अब चुरोटको हरेक खिल्लीमा ‘हरेक सर्कोमा “विष’ लेखिने